Mitohy ny asa: vita ny lalana Ankadilalana Tsimbazaza | NewsMada
Mitohy ny asa: vita ny lalana Ankadilalana Tsimbazaza
Par Taratra sur 06/05/2021
Mitohy ny asa fanarenana ny lalana eto an-dRenivohitra. Ho vita amin’ity herinandro ity ny eny Ankadilalana Tsimbazaza, anisan’ny tena nampikaikaika ny rehetra.
Afaka ny nofy ratsy! Naverina natao godirao tanteraka ny lalana manomboka eo atsinanan’ny kianjan’i Mahamasina, miakatra any Ankadilalana, mitohy any Tsimbazaza hatrany Ankaditoho. Maro ny asa natao, nosoloina avokoa ny fotodrafitrasa samihafa, toy ny fantson-dranon’ny Jirama any ambany lalana, sy ny fantsona mitondra ny tambajotra fifandraisan-davitra, ny fantsona fikorinan’ny rano, ny lalana ho an’ny mpandeha an-tongotra, sns. Naharitra telo volana ny asa ary ho vita tanteraka amin’ny faran’ity herinandro ity.
Lalana Vahilava Ambohitrimanjaka
Nilaza ny talen’ny serasera ao amin’ny minisiteran’ny Asa vaventy, Rahaingoson Harifidy Haja, fa asa manaraka indray ny fandrakofana godirao ny lalana eny amin’ny sampanana mpivarotra taozavatra malagasy, eo amin’ny vahilava, mivily any Ambohitrimanjaka, mivoaka any Andranotapahina (RN 4). Tokony hanomboka amin’ny herinandro ambony ny asa. Eo am-panomanana koa ny antontan-taratasy amin’ny hanamboaran’ilay orinasa sinoa arabe ho an’ny bisikileta amin’ny lalam-baovao Tsarasaotra mankany Ivato, ary tokony hanomboka amin’ny herinandro koa ny asa.
Mikasika ny lalana etsy Ambodivona, nambarany fa andrasana ireo rarivato “pavet”, hamitana ny ilany amin’ny arabe. “Rarivato amboarina amin’ny fitaovana manokana no hapetraka amin’iny lalana iny ka izay no andrasana”, hoy ihany izy.